အကြောပြတ်ခြင်းများကို ကုသရန် သဘာဝ ကုထုံး ၅ မျိုး Bezzia
တောရက်စ် | 13/01/2022 20:00 | အလှတရားလှည့်ကွက်
အရေပြားကို အလွန်အမင်း ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါ အကြောပြတ်ရာတွေ ပေါ်လာပြီး အသားအရည်ကို ကွဲထွက်ရာကတစ်ဆင့် ကော်လာဂျင်နဲ့ အီလက်စတင်ကို ပေးစွမ်းတဲ့ အမျှင်တွေ ပေါ်လာပါတယ်။ ပထမအချိန်လေးမှာ၊ ဤအမှတ်အသားများသည် နီညိုရောင် သို့မဟုတ် ခရမ်းရောင်လေသံဖြင့် ပေါ်လာသည်။အမျှင်ဓာတ်ကွဲခြင်း၏အကျိုးဆက်အဖြစ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ သူတို့ဟာ ဖြူစင်လာပြီး အသားအရေပေါ်မှာ ထာဝရရှိနေမှာပါ။
အကြောပြတ်ရာများ ပေါ်လာသောအခါ ကုသနိုင်သည်၊ အမှတ်အသားများကို မမြင်နိုင်စေရန် အသွင်အပြင်ကို မြှင့်တင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် အခြေချပြီးတာနဲ့ အဖြူရောင်ပြောင်းလာတဲ့အခါ ဖယ်ရှားဖို့ အရမ်းခက်ခဲပါတယ်။ စျေးအကြီးဆုံး အိမ်တွင်းကုထုံးများပင်လျှင် တိကျသေချာသော ရလဒ်များကို မပေးနိုင်ပါ။ သို့သော်၊ အရေပြား၏အသွင်အပြင်ကိုတိုးတက်စေနိုင်သည်။တိကျသောထုတ်ကုန်များဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့ အောက်တွင် သင့်အား ထားခဲ့သည့် ကဲ့သို့သော သဘာဝ ကုထုံးများဖြင့် လည်းကောင်း။
1 အကောင်းဆုံးဆေးတစ်လက်၊ ကြိုတင်ကာကွယ်မှု
1.1 အကြောပြတ်ခြင်းများအတွက် ကုထုံးများ
ငါတို့ပြောသလိုပဲ အကြောပြတ်ခြင်းတွေဟာ အရေပြားရဲ့ အမျှင်တွေ ကွဲအက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာတာပါ။ အရေပြားကို ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ဆွဲဆန့်လိုက်တဲ့အခါ၊ များသောအားဖြင့် ရုတ်တရက် ကိုယ်အလေးချိန် ပြောင်းလဲသွားချိန်မှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်တွင်လည်း ဖြစ်ပွားတတ်ပါသည်။ကိုယ်အလေးချိန် အပြောင်းအလဲကြောင့်သာမက ဟော်မုန်းဓာတ်ကြောင့်လည်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အခြားသော မကြာခဏ အကြောင်းရင်းများမှာ မျိုးရိုးဗီဇ အမွေဆက်ခံခြင်း၊ အချို့သော ဆေးဝါးများ သောက်သုံးခြင်း သို့မဟုတ် ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အာဟာရများကို မဖုံးကွယ်နိုင်သော ညံ့ဖျင်းသော အစားအစာများ စားသုံးခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
မပေါ်စေရန် ဆန့်အမှတ်အသားများ အရေပြားပေါ်တွင် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုပြုလုပ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပထမနဲ့ အရေးအကြီးဆုံးက ရေဓာတ် ဆိုတော့ ရေဓာတ်ခမ်းခြောက်တဲ့ အသားအရေဟာ အားနည်းလာဖို့ အလားအလာ ပိုများပါတယ်။ ချိုး။ ဒုတိယအချက်က အစားအသောက်။ သင့်ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းချုပ်ရန် သဘာဝအစားအစာများကို စားသုံးပါ၊ အမျိုးမျိုးသော၊ ဟန်ချက်ညီပြီး အလယ်အလတ် အစားအစာများကို လိုက်နာပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အကြောပြတ်ခြင်းများကို ကာကွယ်ရန် တတိယနှင့် အခြေခံသော့ချက်ဖြစ်သည်။
ကိုယ်အလေးချိန် ရုတ်တရက် ပြောင်းလဲခြင်း သည် အဓိက အကြောင်းရင်း ဖြစ်သည်။ အရေပြားပေါ်ရှိ အမာရွတ်များ ပေါ်လာခြင်းနှင့် ၎င်းတို့၏ ကုသမှုကို အဟန့်အတားအရှိဆုံးအရာ။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းထားဖို့ ကြိုးစားပြီး ပိန်တဲ့ အစားအသောက်ကို လိုက်နာမယ် ဆိုရင်တော့ ဆုံးရှုံးသွားတဲ့ အသားအရေကို တိုးတက်စေပြီး အသားအရေကို ထိခိုက်မှု မဖြစ်စေဖို့ အာဟာရ လိုအပ်ချက်တွေကို ဖြည့်ဆည်းပေးကြောင်း သေချာပါစေ။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်ရဲ့ လက်ထဲမှာ သင့်ကိုယ်သင် ထားလိုက်ပါ၊ မင်းရဲ့ ပန်းတိုင်ကို ရောက်လိမ့်မယ်။
တစ်ခါတစ်ရံမှာ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ အသားအရေကို ဂရုစိုက်တဲ့အခါမှာတောင် အကြောပြတ်တာတွေ ပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ ထိုအခြေအနေတွင်၊ သင်သည် အကြောပြတ်ခြင်းအတွက် အောက်ပါကုထုံးများကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ သင့်အား အံ့သြစေမည့် သဘာဝနှင့် အိမ်တွင်းကုထုံးများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ရှိနေပါ ၊ မကြာခင်မှာ ခြားနားချက်ကို သတိပြုမိပါလိမ့်မယ်။
ချိုမြိန်ဗာဒံးဆီ. အသားအရေကို နက်ရှိုင်းစွာ အစိုဓာတ်ထိန်းပေးသော ဗီတာမင် E နှင့် ပြန်လည်ရှင်သန်နိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသော သဘာဝထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ရှားစောင်းလက်ပတ်. အနီကွက်အမာရွတ်များကို ကုသပေးပြီး ဖြူဝင်းလာစေရန် အထူးသင့်လျော်ပါသည်။ ရှားစောင်းလက်ပတ်အပျော့ဖတ်ကို အကြောပြတ်ရာတွေပေါ် တိုက်ရိုက် လိမ်းပြီး တစ်နေ့ နှစ်ကြိမ် လိမ်းပေးပါ။
သံပုရာဖျော်ရည်. ဗီတာမင် C ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး antioxidant နှင့် whitening effect ပါ၀င်သည်။ သံပုရာသီးကိုညှစ်ပြီး ဂွမ်းစတွေကို စိမ်ပြီး အကြောပြတ်ရာတွေပေါ်မှာ လိမ်းပေးပါ။ ၁၅ မိနစ်လောက်ထားပြီးမှ ကြက်သီးနွေးရေနဲ့ ဆေးချလိုက်ပါ။
မြင်းခွာ. မြင်းမြီးကို အရေပြားအတွင်းမှ တိုက်ရိုက်လိမ်းပေးသည့်အပြင် အကြောပြတ်ရာများကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အရေပြားဆဲလ်များကို အသစ်ပြန်လည်မွေးဖွားပေးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အိတ်နှစ်အိတ်ဖြင့် ပြုတ်ရည်ကို ပြင်ဆင်ပြီး အရည်ကို စုပ်ယူသည်အထိ စက်ဝိုင်းပုံစံဖြင့် နှိပ်နယ်ကာ အရေပြားပေါ်တွင် လိမ်းပေးပါ။
အာလူး. အာလူးစိမ်းဖျော်ရည်သည် အကြောပြတ်ခြင်းများကို ကုသရန်အတွက် အလွန်အကျိုးရှိသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် အရေပြားဆဲလ်များကို ပြန်လည်မွေးဖွားရန် ကူညီပေးသည့် အရာဖြစ်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။ အာလူးအစိမ်းကို လှီးဖြတ်ပြီး အကြောပြတ်ရာတွေပေါ် ဖျော်ရည်လိမ်းပေးရုံပါပဲ။ 15 မိနစ်ခန့်ထားပြီး အာလူးဖျော်ရည် ခြောက်သွားပါက ရေနွေးနွေးလေးနဲ့ ဖယ်လိုက်ပါ။
အကြောပြတ်ခြင်းများအတွက် ဤကုထုံးများသည် အံ့အားသင့်ဖွယ် ထိရောက်မှုရှိပါသည်။ဒါပေမယ့် ရလဒ်တွေကိုမြင်ဖို့၊ သင်အမြဲမပြတ်ရှိနေဖို့က အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပုံမှန်လုပ်ပြီး သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သဘာဝအစားအစာတွေ များများစားပေးရင် သင့်အသားအရေက အတွင်းပိုင်းကနေ ပိုမိုကောင်းမွန်လာမှာပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Bezzia » လှပမှု » အလှတရားလှည့်ကွက် » အကြောပြတ်ခြင်းများကို ကုသရန် သဘာဝ ကုထုံး ၅